MY REMEMBRANCE: PRC---P=paris, R=Russia and C =china
Posted by puluque at Friday, April 24, 2009
မှတ်သားသိရှိသွားပါတယ်. made in PRC. :D
ဟ ဟား၊ ဂလိုကိုး။ :P :D :)
သူ လည်း လက်ရှိကားသမားဆိုတော့..။
အဟား လူလိမ် မြန်မာကွ
ဒါ ဒို့ဗမာကွ ပြောတော့ဘူး ဟင်းးးးးးးး
အဲဒီလောက်တောင် ဆိုးနေပြီလား.. ကစလ